Ruushka oo diiday maleeshiyaad laaya ciidamada Mareykanka inuu Afghanistaan ka hawlgeliyey | Hangool News
Ruushka oo diiday maleeshiyaad laaya ciidamada Mareykanka inuu Afghanistaan ka hawlgeliyey
13,000 oo askari ayaa Mareykanka ka joogto Afghanistaan
Ruushka ayaa eed uu Mareykanka u soo jeediyey ee ku saabsan inuu howlgeliyey maleeshiyaad xiriir la leh Taalibaan oo laaya ciidamada Mareykanka iyo kuwa Nato ee Afghanistaan ku sugan, ku tilmaantay mid aan sal iyo baar toona lahayn.
Wargeysyada New York Times iyo Washington Post ayaa daabacay warbixinno ay ku sheegeen mas’uuliyiin ka tirsan dalka Mareykanka iney shegeen unugyo ka titsan sirdoonka milatariga Ruushka xiriir la leh iney sanadki hore ay isku dayayeen iney Yurub ka fuliyaan dilal qorsheysan.
Safaaradda Ruushka uu ku leeyahay dalka Mareykanka ayaa sheegtay eeddaasi iney waxyeelleyso xiriirka diblumaasiyadeed ee labada dal.
Ururka Taalibaan wuxuu sida oo kale uu beeniyey heshiis noocaasi inuu la galay sirdoonka dalka Ruushka.
Warbixintan ayaa imaneysa xilli uu Mareykanka uu doonayo inuu heshiis nabadeed uu ku soo afjaro dagaalka 19-ka sano ka socday dalka Afghanistaan.
Sida uu qoray wargeyska New York Times, Madaxweyne Donald Trump inuu arrintan uu ku faahfaahiyey warbixintiisa bishi March, balse Aqalka Cad ayaa hadalkaasi diiday.
Aftida laga yaabo inay Putin u sahasho inuu xilka hayo 36 sano
“Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka midkoodna wax sharraxaad ah kama bixin eedda la sheegay in loo soo jeediyey unug ka tirsan sirdoonka Ruushka,” ayey tiri fiidnimadi Sabtida xoghayaha warfaafinta aqalka cad Kayleigh McEnany.
Waxayna intaa ku dartay, “Iney taasi ka dhigneen in laga hadlay arrimaha sirdoonka, balse warbixinta New York Times lagu qoray ee khaladka ah waxay si khaldan u shegtay inuu madaxweyne Trump si faahfaahsan u arrintan uga hadlay.”
Mas’uul aan magaciisa la shaacin oo u warramay wargeyska New York Times ayaa sheegay sirdoonka Mareykanka iney soo gabagabeeyeen baaritaan ay bilooyin wadeen ayna ku ogaadeen unug ka mid ah sirdoonka militariga Ruushka inuu hawlgeliyey maleeshiyada xulafada Mareykanka uu horkacayo ee ku sugan Afghanistaan iney weerrarro ku qaadaan.
Mileeshiyaad Islaamiyiin ah ama kooxa kale oo hubeysan oo xiriir dhow uu ka dhaxeeyo, ayaa la aaminsan yahay in Ruushka lacago ka helaan, ayuu yiri wargeyska.
Safaaradda Ruushka ee dalka Mareykanka oo bartiisa Twitter-ka farriin soo dhigay wuxuu wargeyska ku eedeeyey inuu faafinayo warar been abuur ah.Ka bood Twitter boggan, 1
2019-kii, 20 askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa lagu dilay dalka Afghanistaan, balse wargeyska New York Times waxay sheegtay dilalkaasi kuwa looga shakisan yahay maleeshiyaadkaasi Ruushka lala xiririnayo iney fuliyeen.
Mas’uul uu wargeyska New York Times uu soo xigtay wuxuu sheegay golaha ammaanka qaranka ee aqalka cad ay ka baaraan degayaan sidi jawaab looga bixin lahaa arrintaa oo Ruushka looga qaadi lahaa tallaabbooyin ay ka mid yihiin in cunaqabateyn la saaro.
Ruushka oo “dilay” hogaamiye daacish ah
Unugga sirdoonka Ruushka ayaa lug ku lahaa iskudaygi dil bishii March 2018-kii Salisbury, Englnad loo geysan rabay Sergie Skripal oo horay uga tirsanaa sirdoonka Ruushka iyo gabadhiisa Yulia.
Afhayeenka ururka Taalibaan wuxuu sida oo kale eeddaasi uu ku tilmaamay mid aan sal iyo baar toona laheen.
“Dilalka iyo khaarijinta aan fulinno waxay soo socdeen sanada badan waxaan dilalkaasi ku fulinnaa awooddayada,” ayuu yiri Zabihullah Mujahid oo u warramay New York Times.
Wuxuuna intaa ku daray ururka Taalibaan inuu joojiyey weerarradi uu ku qaadi jiray Mareykanka iyo ciddamada Nato kaddib marki ay galeen heshiiski bishi Fabraayo ee ku saabsanaa Mareykanka inuu ciidamadiisa kala soo baxa Afghanistaan iyo in cunaqabateennada la qaado. Taa beddelkeedana Taalibaan wuxuu ballan qaaday iney u oggolaaneyn kooxaha xaqjirka ah iney ka dhaqdhaqaaqaan deegaannada ay iyagu gacanta ku hayaan.